डिसेम्बर 25, 2016 अप्रील 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments देश, पुरुष, महिला
पुरुषहरुले महिलाको गुलामी गर्नुपर्ने दुनियाँको एकमात्र देश ! ससारका अधिकाँश देशमा पितृ सत्तात्मक ब्यवस्थामा महिलाहरु आफूहरु दविएको र हेपिएको गुनासो गर्छन् । तर दुनियाँमा यस्तो देश पनि छ जहाँ पुरुष महिलाले जे भन्यो त्यही गर्छन् । ससारमा यस्ता पनि देश छन जहाँ पुरुषलले महिलाको गुलामी गर्नुपर्छ । यहाँ पुरुषहरु महिलाको गुलामीका लागि नै राखिएका छन् । पुरुषलाई गुलाम बनाएर राख्ने देशको नाम हो, अदर वल्र्ड किंगडम । यहाँको शासन पनि महिलाको नेतृत्वमा नै चलिरहेको छ । यद्यपि सन् १९९६ मा चेक रिपब्लिकबाट बनेको यो देशले अहिलेसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाएको छैन ।
यो देशकी रानीको नाम प्याटि्रसिया प्रथम हो । उनको यो देशमा एकछत्र राज छ । महिलालाई एक नम्बर नागरिकको दर्जा मिल्दछ र पुरुषहरु केवल महिलाका दास हुन्छन् । अन्य देशबाट आएका पुरुषहरुले यो देशमा रानीका लागि बस्ने सोफाहरु निर्माण गर्ने काम गर्दछन् । रक्सी पिउनुअघि पुरुषहरुले आफ्नी मालिक्नीको पाउमा रक्सी चढाउनु पर्दछ र मात्र रक्सी पिउन पाउँछन् । म्हिलाको अनुमति विना पुरुषहरुले कुनैपनि काम गर्न पाउँदैनन् । कानून पालना नगर्ने पुरुषहरुमाथि सख्त सजायँ हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
← पूर्व राष्ट्रपतिकोबारे कविता लेख्नेलाई ६ महिनाको जेल सजाय
सपनामा हात्ती देखेमा के हुन्छ ? →
म जहाँ भएपनि मुटुमा यो देश फुलोस्
डिसेम्बर 24, 2016 डिसेम्बर 24, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
मार्च 4, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0